ပညာရေးဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ လူငယ်တွေအတွက် နည်းပညာ အလင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ကို မြန်မာပြည်မှာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုခွင့်မရကြပါဘူး။ Project, Thesis နှင့် Research တွေလုပ်နေတဲ့ နည်းပညာကျောင်းသား လူငယ်တွေအတွက် Library ကောင်းကောင်းတွေ Internet ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခွင့်တွေဟာ အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ဟာ ယျေဘူယျအားဖြင့် မည်သူမျှ မပိုင်ဆိုင်ပါဘူး။ သို့သော် မြန်မာပြည်မှာတော့ ပြိတ္တာ(ခဏ ခဏ လိုက်ပိတ်နေလို့) တစ်စုက ကိုင်တွယ် ထိန်းချုပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ Adult site တွေ porin site တွေပိတ်တာကတော့ လက်ခံပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် ဘာမှအကျိုးကျေးဇူးလည်း မရှိသလို ဒုစရိုက်မှုတွေတောင် တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။ သူ့တို့ပိတ်တဲ့ထဲမှာ ဒေါသအဖြစ်မိဆုံးက Free Mail Site တွေကို ပိတ်တာပါပဲ။
IT ခေတ်မှာ လူတိုင်းနီးပါး free mail သုံးနေကြတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲလို အလကား ဒလဟော ပေးထားတဲ့ mail တွေကို လိုက်ပိတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ mpt, bagan mail တွေကို လိုက်ရောင်းခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း မိမိရဲ့ email service တွေကသာ ကောင်းမွန်နေလို့ကတော့ marketing လုပ်ဖို့တောင်မလိုဘဲ customer တွေ ၀ယ်သုံးကြမှာ သေချာပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်လို့ကတော့ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ် ဘယ်သူမှ လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ ပိတ်တာတွေများလာရင် လုပ်နိုင်တာ တစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်။ မရရအောင် ကိုယ်တိုင် try လုပ်ဖို့ပဲ လိုတာပေါ့။ အဲလို try လုပ်တဲ့ထဲမှာ နည်းလမ်း နှစ်မျိုးအနေနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမနည်းကတော့ website တွေကနေတစ်ဆင့် bypass လုပ်ခြင်း နှင့် ဒုတိယ နည်းကတော့ software သုံးပြီး bypass လုပ်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ website တွေကနေတစ်ဆင့် bypass ရအောင် try ကြည်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ website မှာ bypass proxies တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Beat-censorship-using-these-proxies by Sharjeel Sayed
How to access blocked websites by web stuff scan
ဒုတိယနည်းအနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ bypass application တွေကို သုံးပြီး ကျော်ခွနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိလည်းထားပေါ့။ သံဆူးကြိုးနဲ့ ညိပြီး ပုဆိုးပြဲတာကို့ ဂွပြဲတာတို့တွေတော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့
1. Ultrasurf [Download]
2. GPass [Download]
3. FreeGate [Download]
4. Garden GTunnel [Download]
5. JAP [Download]
6. Your Freedom [Download]
7. Hopster [Download]
8. Freenet [Download]
9. Tor [Download]
10. HotSpot Shield [Download]
Bypass applications list via : sizlopedia
Logo Design : CMS
Tags: proxy, proxies, free proxy, bypass proxy, bypass software, bypass firewall
sltmycom 2:38 am
ဂေါ် ပါတယ်ကွာ... :)
ဂေါ် = မိုက်တယ်..
ဂေါ = တောကျတယ်..
CMS 1:16 am
Definition ဆရာကြီးလား :P
မင်းရဲ့ comment ကလည်း ဂေါ်ပါတယ်ကွာ။ လန်ထွက်နေတာပဲ :P
စိုးထက် - Soe Htet ! 11:57 am
:) ဂွဒ် ပါတယ် ဗျ :P
ံဲ့မြန်မာပြည် ပြိတ္တာတွေမှ ကင်းဝေးပါစေ.
proxy သုံးတော့ connection ကနှေး , နဂို ထဲက connection က ကောင်းတာမဟုတ်နဲ့....
download လုပ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ မောပြီသာမှတ်...
CMS 9:51 pm
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ anonymous ရေ :)